Aqalka sare oo qorshaynaya inuu xafiisyo ka furto Garowe – Kalfadhi
Gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliya Sen. Abshir Bukhaari ayaa sheegay in golohoodu qorshaynayo inuu xaruun leh xafiisyo lagu shaqeeyo ka samaysto Garowe.
Sen. Abshir wuxuu sheegay in xafiisyadaas ay dadweynaha ugu adeegi doonaan mudanayaasha laga soo doorto Puntland ee ku jira aqalka sare. Ma uusan sheegin qorshahaas wakhtiga ugu dhow ee uu hirgeli doono.
Wuxuu sidoo kale, Sen. Abshir ka hadlay wada-shaqaynta dowlad-goboleedyada iyo dowladda fedeaalka ah. Wuxuuna sheegay in khilaafaadkaas ay laba arrimood saldhig u yihiin, iyadoo ay jirto u fiirsi la’aan nidaamka federaalku siduu u shaqeeyo iyo qodobada dastuurka KMG ah ee qeexaya wada-shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda ku dhisan nidaamka federaalka ah.
Sen. Abshir oo safar dhawr cisho ah ku joogay Puntland ayaa warfidiyeennada u sheegay in adeegyada ka socda gobolada Puntland ay tilmaan u yihiin nidaamka wanaagsan ee federaalka.
Khilaafka dowlad-goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa badanaa xoogisu ka bilawda Puntland.